एसिड अझै सर्वसुलभ !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
एसिड अझै सर्वसुलभ !
अध्यादेश ल्याइए पनि फितलो नियमन र निगरानीले एसिड आक्रमणको घटना निरन्तर
‘हरेक चोक र घुम्तीमा एसिड बेच्न राखिएको देखिन्छ । बेच्नेलाई कारबाही गर्ने कि नियमनको जिम्मा पाएको प्रशासनलाई ?’
वैशाख १, २०७८ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — रूपबहादुर विकको बास आइतबार यता साँखुस्थित सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा छ । तेजाबको जलनले घाइते भएका २८ वर्षीय साइँलो भाइ बुद्धिको उपचारमा कति खटिनुपर्ने हो, अझै टुंगो छैन । बुद्धिको देब्रे आँखाको डिल, देब्रे गाला, त्यही भागको कानदेखि गर्धनसम्म एसिडको जलन छ ।
गोकर्णेश्वरबाट सुन्ताखाना जाने बाटोमै पर्ने जेनिस हेन्डिक्राफ्टमा काम गर्ने बुद्धिमाथि सँगै काम गर्ने रमेश रम्तेलले आइतबार बिहान एसिड प्रहार गरेका हुन् । बिहानको समय बुद्धि भाडा टल्काउन एसिड ब्रस गर्दै थिए । नजिकै रहेका एउटा बालकले उनलाई जिस्किँदै पानी छ्यापिदिए । बुद्धिले ती बालकलाई किन त्यसो गरेको भन्दै हकारे । यो सब नजिकैबाट देखिरहेका रमेशले रिसाउँदै आएर ‘हाम्रो भाइलाई किन थर्काको ?’ भन्न थाले । विवाद बढ्दै जाँदा रमेशले नजिकै रहेको एसिडको बट्टासहित उनलाई हिर्काए ।
घटनालगत्तै महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले रमेशलाई पक्राउ गरेको छ । वृत्तका अनुसार सोमबार मात्रै थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्न दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै बौद्ध वृत्तले हेरिरहेको एसिड दुरुपयोगबाट भएको यो दोस्रो घटना हो । यसले घातक मानिने रासायनिक पदार्थको निगरानी र नियमन कति फितलो छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।
शंखरापुर नगरपालिका–१ स्थित सरस्वती दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाको आँगनमा गत १६ गते होली खेल्ने क्रम चलिरहेको थियो । दूधको फ्याट नाप्ने सल्फ्युरिक एसिडलाई पानी ठानेर छ्याप्दा ९ र ११ वर्षका दुई बालक र १६ वर्षकी एक किशोरी घाइते भए । बौद्ध वृत्तले डेरीका सञ्चालक केशवप्रसाद नेपालसहित एसिड छ्याप्ने १६ र १७ वर्षका दुई किशोरलाई पनि पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ । बौद्ध वृत्तका डीएसपी नवीन कार्कीले उक्त मुद्दामा पक्राउ परी थुनामा रहेकै तीनै जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि मुद्दा अदालती प्रक्रियामा जान नसकेको बताए ।
उक्त घटनामा दलबहादुर तामाङकी छोरी पनि परिन् । खेतीपाती र दुई भैंसी पालेर जीवन निर्बाह गर्दै आएका दलबहादुर एसिड जलनमा छोरी परेपछि आपत्मा परेका छन् । उक्त घटनाका पीडित दुई बालक उपचारपछि घर फर्के पनि दलबहादुरकी छोरीको उपचार चलिरहेको छ । उनले सुनाए, ‘एक जना कुर्ने मान्छे चाहियो, कहिलेकाहीं घरको केही खानेकुरा खुवाऊँ जस्तो लाग्छ, पुर्‍याउन जानुपर्‍यो । छोरीले बेकसुर दुःख पाई ।’ डेरीले संवेदनशील पदार्थ गोप्य ठाउँमा नराख्दा छोरीले दुःख पाएकी उनले बताए । उनले चिन्ता जनाउँदै भने, ‘त्यही घटनापछि छोरीको ९ कक्षाको पढाइ छुटेको छ । भोलि झन् कति दुःख पाउने हो !’
यसअघिका एसिड प्रहारका अधिकांश घटनामा पीडकले सजिलै एसिड खरिद गरेको देखिन्छ । २०७६ साउन ६ मा स्वयम्भूमा २२ वर्षीया पवित्रा कार्कीमाथि मोहम्मद आलमले एसिड छ्यापेका थिए । मोहम्मदले प्रहरी बयानमा आफ्नो गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा ट्वाइलेट सफा गर्न वर्षौंपहिले किनेको एसिड प्रयोग गरेको बताएका थिए । गत वर्षकै फागुन २५ मा कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिका–१ की ५१ वर्षीया वेदमतीदेवी गुप्तामाथि एसिड प्रहार भयो । गाउँमै ब्याट्री मर्मत गर्ने पसल सञ्चालक हरिनारायण बराईले आफ्नै पसलबाट एसिड ल्याएर वेदमतीलाई छ्यापेका थिए । २०७६ जेठ १ मा कालोपुल बस्ने २० वर्षीया जेनी खड्कामाथि श्रीमान् विकास भनिने विष्णु भुजेलले एसिड छ्यापेका थिए । पक्राउपछि विष्णुले प्रहरीलाई बनेपाको एक सुनचाँदी पसलबाट एसिड किनेको बताएका थिए । यी प्रतिनिधि घटनाले एसिड कति सुलभ छ र प्रतिशोध साँध्न कसरी दुरुपयोग भइरहेको भन्ने बुझाउँछन् ।
काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकामा गत मंसिरमा एसिडका कारण बालकको ज्यानै गयो । बेथानचोक–२ स्थित नवराज तिमल्सेनाको दुग्ध संकलन केन्द्रमा खेल्ने क्रममा २ वर्षीय बालक सम्पर्द तिमल्सेनाले बियरको बोतलमा राखिएको एसिड भेटेका थिए, जसबाट उनको शरीरको २५ प्रतिशत भाग जलेको थियो । कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा करिब एक महिनापछि बालकको ज्यान गयो ।
सरकारले गत असोज १२ मा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमा नाइट्रिक, सल्फ्युरिक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रकाशन गरी भनेका तेजाबजन्य र ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार, प्रयोग, बिक्रीवितरण तथा त्यस्तो पदार्थको विसर्जन गर्ने कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुका स्वास्थ्य र अन्य जैविक वा गैरजैविक वस्तुलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई निवारण गर्ने अध्यादेशको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । अध्यादेशअनुसार अनुमतिपत्र नलिई एसिडको उत्पादन, निकासी, पैठारी र बिक्रीवितरण गरे वा स्वीकृति नलिई पैठारी गरे ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । यो अध्यादेशले उत्पादक तथा बिक्रेताले प्रयोग र बिक्री तथा उत्पादनसम्बन्धी सर्त पालना नगरे पनि १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले यस्तो कानुनी व्यवस्था गरे पनि सुनचाँदी पसलदेखि, दूध डेरीसम्म, तामा, पित्तलका भाँडा बनाउने उद्योगदेखि गाडीको ब्याट्री मर्मत हुने ठाउँसम्म बिनाकार्यविधि एसिडको निर्बाध प्रयोग भइरहेको छ ।
अध्यादेशको दफा ४ मा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको बिक्रीवितरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको अधिकृतले अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था छ । एसिडविरुद्धको अभियानमा संलग्न उज्ज्वल विक्रम थापाले अनुगमन नहुँदा खुला रूपमै तेजाबको बिक्रीवितरण भइरहेको र औद्योगिक प्रयोजनका लागि किन्नेले पनि त्यसको उचित भण्डारण नगर्दा जलनका घटना भइरहेको बताए ।
गृह मन्त्रालयले चैत २२ मा सूचना जारी गर्दै औद्योगिक प्रयोजनका लागि तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ आवश्यक परे पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने जनाएको छ । गृहले यस्तो सूचना जारी गरे पनि डिपार्टमेन्टल स्टोरदेखि अनलाइन पसलबाट ट्वाइलेट सफा गर्ने वा अन्य नाममा एसिड र एसिडजन्य पदार्थको खुला बिक्रीवितरण भइरहेको पाइन्छ । अभियन्ता थापाले सार्वजनिक स्थानमा एसिड बिक्रीवितरण भइरहेको सूचनाजन्य तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने गर्छन् । उनले भने, ‘हरेक चोक र घुम्तीमा एसिड बेच्न राखिएको देखिन्छ । अब बेच्नेलाई कारबाही गर्ने कि नियमनको जिम्मा पाएको प्रशासनलाई ?’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले अध्यादेशले तोकेको कार्यविधि बाहिर गएर एसिड बिक्रीवितरण, ओसारपसार र भण्डारण गर्नु दण्डनीय हुने बताए । उनले नयाँ कार्यविधिबारे व्यापक रूपमा जनस्तरमा बुझाउने काम प्रहरीले सुरु गर्ने जानकारी दिए । ‘कार्यविधिविपरीत एसिड बिक्रीवितरण गरिएको सूचना आम नागरिकले नजिकको प्रहरीलाई जानकारी गराए तुरुन्तै कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : वैशाख १, २०७८ ०९:३०
बेपत्ता व्यक्तिको आशंका गरिएको कंकालको डीएनए अझै परीक्षण हुन सकेन
ज्यान गुमाएका इन्जिनियरको परिवारले केही राहत पाएनन्
चैत्र २६, २०७७ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — मेलम्चीको मुहान भएको हेलम्बु गाउँपालिका–१, अम्बाथानको १७ नम्बर गेट गत असार ३० मा फुट्दा पानीले इन्जिनियर सतीश गोइत र सवारी चालक राधाकृष्ण थापामगरलाई बगायो । यो घटनाको आठ महिना २० दिनपछि गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणको उद्घाटन गरिन् ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु-१ अम्बाथानमा गत असार ३० गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य सुरुङको १७ नम्बर गेट भत्किंदा पानीले बगाएको गाडी। दायाँ तस्बिरमा इन्जिनियर सतीश गोइत (माथि) र चालक राधाकृष्ण थापामगर (तल) ।
हराएका सवारी चालक राधाकृष्णको दाहसंस्कार परिवारले शवबिनै गरिसकेको छ । शव नभेटिँदै घटनाको ५ महिना १० दिनपछि गत फागुन १० मा खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङ र सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर हतारका साथ मेलम्चीको मुहानस्थल पुगेका थिए । तीनै जनाले कन्ट्रोल कक्षको स्विच थिचेर उद्घाटन गरेपछि अस्थायी डाइभर्सनबाट सुरुङको मुख्य गेटसम्मको २ सय ७० मिटर पानी बग्यो । त्यसपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौंसम्म ल्याइपुर्‍याउने काम विभिन्न चरणमा चल्यो ।
घटना हुँदा राधाकृष्णका छोरा संगम मलेसियामा थिए । कोरोना संक्रमणको दर तीव्र बनेकाले मलेसिया–काठमाडौं उडान भन्नेबित्तिकै हुने अवस्थामा थिएन । घटनाको दुई सातापछि बल्लतल्ल उनी नेपाल आए । सुरुवाती दिनमा सुरक्षा निकायले पनि राधाकृष्णको शव खोज्न चासो देखाएको थियो । आफन्तले घटनापछि ४/५ दिनसम्म सम्भावित स्थानमा शव खोजेका थिए । तर समय बित्दै जाँदा खोजीको चासो पनि हट्दै गयो । राधाकृष्णको मृत्यु भएपछि आयोजनाको परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको स्पेनको इप्टिसा बेट्स जेभी कम्पनीका तर्फबाट संगमले रेकर्ड किपरको जागिर पाएका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना : सुरुङको गुणस्तरमाथि छानबिन
संगमकी आमा विस्तारै पति वियोगबाट बाहिर निस्कने प्रयासमा छिन् । संगमले भने, ‘जेनतेन मन बुझाए पनि शव नभेटिएसम्म फर्केर घर आउनुहुन्छ भन्नेजस्तो हुँदो रहेछ ।’ उनले घटना भएको यतिका महिना भइसक्दा पनि राज्यले बुबालाई नसम्झिएको गुनासो सुनाए । उनले भने, ‘मेलम्चीको पानी काठमाडौं लैजान ठूलठूला कर्मचारीको जस्तै मेरो बुबाको पनि योगदान थियो । कम्तीमा बुबाको योगदान सम्झिदिए हुन्थ्यो ।’
घटनाको करिब डेढ महिनापछि घटनास्थलबाट केही पर भीमटार–सिपाघाट क्षेत्रमा एउटा कंकाल भेटिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी अधिकारीले उक्त कंकाल राधाकृष्णको हो भनेर लख काटे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार थिएन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता पन्तले डीएनए परीक्षणका लागि कंकालको नमुना पठाइएको बताए । संगमका अनुसार कंकाल भेटिएपछि उनी र उनकी आमालाई डीएनए म्याचिङका निम्ति भन्दै रगतको नमुना दिन बोलाइएको थियो । उनले भने, ‘अस्पतालमै गएर आमा र मैले रगतको नमुना दिएका थियौं । खै अहिलेसम्म केही खबर गरेका छैनन् ।’
आयोजनाका सामाजिक विकास विज्ञ शम्भु कट्टेलले डीएनए परीक्षणका निम्ति नमुना राखेर कंकाल प्रहरीले नष्ट गरिदिएको बताए । उनले भदौ अन्तिम सातातिर डीएनए परीक्षणका निम्ति प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा नमुना पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म रिपोर्ट हात नपरिसकेको बताए । उनले भने, ‘विधि विज्ञान प्रयोगशालामा अहिले डीएनए टेस्ट गर्ने केमिकल सकिएकाले परीक्षण नभएको कुरा आयो । यसबारे प्रहरीसँग तारन्तार बुझिरहेका छौं ।’
मेलम्ची सुरुङ : सात दिन पनि टिकेन अडिटको मुख्य गेट
घटनापछि खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दवाडीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा ढोका भत्किनुमा आयोजना, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ । प्रतिवेदनमा जे लेखिए पनि घटनाको करिब नौ महिना हुँदा पनि न कोही दोषी ठहर भएका छन् न त कसैमाथि कुनै कारबाही नै गरिएको छ । चालक राधाकृष्णका छोरा संगमले भने, ‘खै के कारणले त्यस्तो दुर्घटना भयो र बुबा घटनामा पर्नुभयो, हामीलाई कसैले केही बताएको छैन ।’
उक्त ढोका भत्किएकै कारण आयोजनाको निर्माण तोकिएभन्दा सात महिना ढिलो भयो । घटनाको विषयमा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए । साउन १५ मा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाइयो । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीलाई यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले केही बताएनन् ।
मेलम्चीको मुख्य सुरुङ मार्गभित्र गेट फुटेपछि निस्किएको पानीले क्षति पुर्‍याएको अडिट र हेडवर्क्सस्थल हेर्दै आयोजनाका कर्मचारी (माथि) र सुरुङभित्रैदेखि बगेर आएको गाडी । फाइल तस्बिर : अनिश तिवारी/कान्तिपुर
इन्जिनियर सतीशकृष्णका दाइ आतिश प्रदेश २ का कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको सवारी चालक हुन् । घटनाको दिन उनी कार्यालयको काममा जनकपुरमै थिए । घटना भएको करिब डेढ घण्टापछि आयोजनामै काम गर्ने सतीशका साथीले उनलाई दुर्घटनाबारे बताएका थिए । खबर सुनेपछि ओठतालु सुकेको उनले सुनाए । नसुकोस् पनि किन, सतीशकृष्णलाई भारतको चण्डीगढमा इन्जिनियरिङ पढाउनका लागि खर्च जुटाउन उनले ४ वर्ष साउदी अरबमा काम गरेका थिए । उनले भने, ‘३५ लाख खर्च गरेर भाइलाई इन्जिनियर बनाएका थियौं । उसको पढाइको ऋण पनि तिरिनसक्दै यस्तो घटना भयो ।’
घटनाबारे थाहा पाएको साँझ उनी आफन्तसँग गाडी रिजर्भ गरेर घटनास्थल लागेका थिए । भोलिपल्ट बिहान ६ बजे उनीहरू पुग्दा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सतीशको शव खोजिरहेको थियो । थप उद्धार टोली आउँदै छ भन्ने सुनेपछि उनीहरू घटनास्थल नजिकै बसे । दिउँसो ४ बजेतिर भाइको शव भेटियो । आयोजनाका कर्मचारीले उनलाई दाहसंस्कार खर्च भन्दै एक लाख रुपैयाँ थमाए । त्यही राति १० बजे उनी भाइको शव लिएर जनकपुर हिँडे । भोलिपल्ट बिहान गंगासागरमा भाइको सद्गत सकियो ।
घटनाको केही सातापछि सतीशको परिवारलाई सिनो हाइड्रोले बिमाबापतको रकम बुझ्न बोलायो । १० लाखको बिमा भए पनि उनीहरूलाई घटनालगत्तै किरिया खर्च भनेर दिइएको १ लाख कटाएर ९ लाख दिइयो । आतिशले भने, ‘न हामीलाई कसको गल्तीले मेरो भाइको ज्यान गयो भनेर बताइयो । न बिमाबाहेकको अरू राहत नै दिइयो ।’ घटनापछि उनले खानेपानी विभागको अस्थायी सवारी चालकको जागिर भने पाए । मृतकका बाबु स्थानीय सरकारी स्कुलका निमावि तहका शिक्षक अमर किशोर लाउँलाउँ खाउँखाउँको उमेरमा ज्यान गुमाएको छोरालाई सम्झेर दिन बिताइरहेका छन् ।
आतिशको परिवारले केही राहत मिल्छ कि भनेर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई पनि पत्र लेखेको थियो । तर प्रदेश सरकारले घटना वाग्मती प्रदेशमा भएका भन्दै राहत दिन नसकिने बतायो । उनले चित्त बुझाएको भाकामा भने, ‘हामीले कसैलाई चिनेको छैन । कसैले थप केही सोधेको पनि छैन । भाइको ज्यान गए पनि उसले गरेको कामले गर्दा काठमाडौंको मान्छेले पानी खान पाएछन् ।’
काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउन दुई दशकदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको र हरेक सरकारको चुनावी नारा बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीले ज्यान गुमाउनुको यकिन कारण पत्ता लगाउने विषय कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन । करिब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनामा उक्त घटना हुनुको जिम्मेवार को थियो ? उनीहरूलाई सम्झिने कसले ? जिम्मेवार निकायको सरोकारबाट यो विषय हराएपछि सम्बन्धित परिवारलाई यही प्रश्नले घोचिरहेको छ ।
यसरी भएको थियो दुर्घटना
अनिश तिवारी (सिन्धुपाल्चोक)
बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थल हेलम्बु–१, अम्बाथानमा ‘रिभिनिङ पार्ट’ र गेट नम्बर १७ लाई तयारी राख्नेलगायतका काम हुँदै थिए । सुन्दरीजलसम्म पानी लैजानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने मुख्य सुरुङको मेन गेट अर्थात् गेट नम्बर १७ लाई बलियोसँग लगाउन ३ सातासम्म लाग्ने जानकारी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले दिएको थियो । यता मुख्य सुरुङको गेट नम्बर १७ सम्म पानी पुर्‍याएपछि मुहानस्थलमा कर्मचारीलगायत सबै उत्साहका साथ आयोजनामा खटिरहेका थिए ।
साताअघिदेखि गेट नम्बर १७ र गेट भल्भमा केही समस्या देखिएकाले दिउँसो १२ बजेतिर दुई इन्जिनियरसहित हेल्पर र प्राविधिक सवारी लिएर सुरुङभित्र बुझ्न गए । टोलीमा साइट इन्जिनियर शेखर खनाल, सब हेल्पर पेम्बा लामा, सवारी चालक राधाकृष्ण थापामगर र इन्जिनियर सतीशकृष्ण गोइत थिए । उनीहरूले सुरुङको प्राविधिक समस्या नियाल्दै थिए । सुरुङबाट एक्कासि ड्याम्म आवाज आयो । आयोजनाका कर्मचारी र केही परका गाउँलेमा खैलाबैला मच्चियो । उनीहरू अम्बाथान हेडबक्सस्थलमा जम्मा भए । सुरक्षाकर्मी आइपुगे । एकैछिनमा गेट नम्बर १७ भत्काएर आएको बाढीले सुरुङ, गेट र अन्य संरचना ध्वस्त भत्काउँदै लग्यो । हेर्दाहेर्दै चालक थापामगरले चलाउने गरेको बा१झ १७६४ नम्बरको रातो स्कार्पियो बाढीले बगाएर मेलम्चीमा मिसायो । साइट इन्जिनियर शेखर खनाल, सब हेल्पर पेम्बा लामा त्यही बाढीमा भेलमा बग्दै गरेको देखेपछि सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले बग्दाबग्दै उद्धार गरे ।
मेलम्चीमा प्राथमिक उपचारपछि उनीहरूलाई श्री एयर लाइन्स हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर उपचारार्थ काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पताल लगियो । त्यतिखेर सुरुङबाट काठमाडौंको सुन्दरीजल जोड्ने सुरुङमार्गको ‘जिरो ग्रेनेज’ देखि ८ सय मिटरसम्म पानी पठाइएको थियो । आयोजनाका एक प्राविधिकका अनुसार मुख्य सुरुङबाट गेट फुटेर फर्किएको पानीको बाढीले बीचको गेट भल्भ टुटाएर मुख्य सुरुङसँग बीचमा जोडिने सहायक अम्बाथन अडिटबाट निस्किएको थियो । ‘त्यही क्रममा उनीहरूलाई बीचैबाट बगाएको हो, गेट नम्बर १७ मा त सुरुदेखि समस्या देखिएको थियो,’ एक प्राविधिकले भने ।
उनका अनुसार मेलम्ची आयोजनाको ग्याल्थुम, सिन्धुदेखि अम्बाथानसम्म ३ वटा अडिट पानी बालुवा थिग्राएर फाल्न बनाइएका छन् । ‘मान्छे र सवारी छिर्ने सुरुङबाट एक्कासि बाढी आउनु, बीचैमा अडिटसँग जोडिएको गेट भल्भको नट वा गेट कुनै कारणले खुस्किनु जस्ता समस्या देखिन्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०७:०१
बाबुराम-उपेन्द्र समूहले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने
एमालेद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्‍वासको मत दिन ह्‍वीप जारी